विराटनगरमा औषधि व्यवसायीको शंकास्पद मृत्यु - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ११:०१
विराटनगर, ४ जेठ । विराटनगर महानगरपालिका–१० मधुमारामा आज बिहान एक जना औषधि व्यवसायीको शंकास्पद तवरबाट मृत्यु भएको छ ।
घटनाको प्रकृति हेर्दा उनको स्वभाविक मृत्यु नभइकन हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ खनार घर भई विराटनगरमा औषधिको डिलर सञ्चालन गर्दै आएका ३३ वर्षीय देवीप्रसाद दुलालको मृत्यु शंकास्पद बनेर गएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताउनु भयो । दुलालले मधुमारामा घर भाडामा लिएर देवी माँ पाथीभरा फर्मा नाम दिएर औषधिको डिलर सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो । सुतेकै ओछ्यानमा बेहोस अवस्थामा भेटिएको भन्दै उहाँलाई उपचारका लागि बिहान ३ बजे कोसी अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार श्रीमती मीना श्रेष्ठ दुलाल, छिमेकी कल्याण राजवंशी र अर्का औषधि व्यवसायी धनबहादुर काफ्ले मिलेर उपचारका लागि पुर्याउन साथ अस्पतालले उहाँलाई मृत घोषित गरेको थियो । मृतकको शवको अवस्था हेरेर चिकित्सकले मृत्यु अस्वभाविक रहेको बताएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । डीएसपी राईका अनुसार दुलालको नाक, हात, घाँटी र वायाँ आँखाको डिलमा चोट लागेको र मुखबाट रगत पनि बगिरहेको अवस्थामा शव रहेकाले घटनालाई शंकास्पद मानिएको हो । सुतेको ओछ्यानमा रगत लतपतिको भेटिएको छ । डीएसपी राईले घटनास्थल मुचुल्का उठाउँदै गम्भीर ढंगबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
प्रहरीले दुलालकी श्रीमती मीना, विराटनगरकै औषधि व्यवासायीहरु धनबहादुर काफ्ले र हरिमोहन श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुमाथि सोधपुछ गर्दै घटनाको अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको जानकारी राईले दिनु भयो । प्रहरीकाअनुसार औषधि व्यवसायी काफ्ले र श्रेष्ठ राति अवेरसम्म दुलालकै कोठामा मदिरा सेवन गर्दै बसेको खुलेको छ ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी श्रीमती मीनाले श्रीमान उच्च रक्तचापको बिरामी रहेको र त्यही कारणले मृत्यु भएको हुन सक्ने दाबी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । तर प्रहरीले भने घटनाको प्रकृति हेर्दा कुटपिट गर्दै घाँटी कसेर हत्या गरेको जस्तो देखिने बताएको छ । डीएसपी राईले राति अवेरसम्म दुलालकै कोठामा मदिरा सेवन गरेर बसेको खुलेपछि अरु दुई जना औषधि व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताउनु भयो । त्यस्तै एउटै कोठामा सुतेका श्रीमानको मृत्यु हुँदा पनि थाहा नपाएको बताएपछि र शव हेर्दा मृत्यु अस्वभाविक देखिएपछि श्रीमतीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ थालिएको उहाँको भनाइ छ । दुलाल र मीनाका ८ वर्षका छोरा छन् ।
डीएसपी राईले शवलाई पोस्टमार्टमकालागि कोसी अस्पतालमा राखिएको जानकारी दिनु भयो । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि र अनुसन्धान टुँगिएपछि घटनाको वस्ताविकता बाहिर आउने उहाँको भनाइ छ ।
कटहरीमा झडप, विराटनगरमा प्रदर्शन
विराटनगर, २१ पुस । प्रदेश १ का प्रमुख प्रा.डा. गोबिन्द तुम्बाहाङले समयसापेक्ष शिक्षा दिनु आजको...
२२ औ संस्करणको जेसीज टेष्टी–टेष्टी हाजिरी जवाफ भोलीबाट शुरु हुदै
विराटनगर २९ पुस । Silfar buy online, acquire zithromax. विराटनगर जुनियर जेसीजको आयोजना तथा कावरा...